प्रकाशित समय: ९:५९:०७
काठमाडौं : शासन व्यवस्थाको दृष्टिले देशले छलाङ मारे पनि देशले लिनुपर्ने खास गति लिन सकेको छैन । कुनै पनि देशले गति लिनुको अर्थ त्यहाँ आर्थिक विकास, शान्ति, समृद्धि, स्थिरता, स्वास्थ्य र शिक्षामा सवलता वा उन्नति छाएको हुन्छ । यी सबै दृष्टिले नेपाल दीनहीन अवस्थामा छ । यस्तो दूरावस्थाबाट मुलुकलाई अघि हिँडाउनु आजको आवश्यकता हो । कसरी अघि बढ्न सक्छ त देश ? यो गम्भीर प्रश्नलाई यसरी सम्बोधन गर्न खोजेका छन् कानुनविद् एवम् सुपरिचित बुद्धिजीवी डा. युवराज संग्रौलाले । आफ्नो फेसबुक वालमा उनी लेख्छन्-